सम्बन्ध सकिदैछ भन्ने देखाउने ६ वटा संकेतहरु, सावधान नभए सम्बन्ध सकिन्छ सकिन्छ - Sakaratmak Soch
सम्बन्ध सकिदैछ भन्ने देखाउने ६ वटा संकेतहरु, सावधान नभए सम्बन्ध सकिन्छ सकिन्छ
प्रेम गरेपछि विवाह गर्नैपर्छ भन्ने छैन । यद्यपि हामीकहाँ प्रेमलाई नै विवाहको पहिलो खुड्किलो मानिन्छ । अर्थात प्रेम त्यसबेला सफल मानिन्छ, जब त्यो विवाहमा रुपान्तरण हुन्छ । त्यसैले प्रेम-सम्बन्धलाई दाम्पत्य जीवनको पूर्व तयारी समेत मान्न सकिन्छ । यहीबेला आफ्ना पार्टनरको रुची, स्वभाव, प्रवृत्ति, इच्छा, लक्ष्य, बानीव्यवहार आदि थाहा पाउन सकिन्छ । प्रेम सम्बन्धमा रहेकै बेला पार्टनरका सबै आनीबानी थाहा हुन्छ । कतिपय आनीबानी यस्ता हुन्छन्, जसले वैवाहिक जीवनलाई खल्लो बनाउँछ । यदि पार्टनरको संकेत खराब छ भने त्यस्तो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुँदैन ।
संकेत-१ : प्रेम सम्बन्धमा थोर बहुत इष्र्या हुन्छ । सानोतिनो इष्र्याले सम्बन्धलाई मसलेदार बनाउँछ । तर, यो त्यस किसिमको नुन जस्तै हो, जो धेरै भएमा स्वाद बिग्रन्छ । यद्यपी तपाईंको पार्टनर अत्याधिक इष्र्यालु छन् भने तपाईंको सम्बन्धका लागि यो राम्रो संकेत होइन ।
संकेत-२ : तपाईंको पार्टनर तपाईंको प्राजेक्ट र लक्ष्यको बारेमा के सोच्छन् ? के ऊ नै तपाईंको जीवनको सबै निर्णय लिन्छन् ? तपाईंले के गर्ने/के गर्ने भन्ने कुरा पार्टनरले नै तय गर्छन् ? यस किसिमको सम्बन्धले तपाईंलाई रोबोट बनाउँछ । यसबाट जति सक्दो अलग हुनु नै राम्रो ।
संकेत-३ : यस्ता पार्टनर सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ, जसलाई पटक पटक अनुभूत गराउनुपर्ने आवश्यक्ता हुन्छ कि तपाईं उनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ । तपाईं चाहे जे सुकै गर्नुहोस्, तर असुरक्षाको भावना राख्ने व्यक्तिलाई विश्वास दिलाउन निकै कठिन हुन्छ ।
संकेत-४ : यस्ता पार्टनरसँग जीवन विताउनु पनि निकै गाह्रो हुन्छ जो हरेक काममा पूर्णताको अपेक्षा गर्छन् । कुनैपनि कुरामा पूर्णता खोज्नु आफैमा नराम्रो होइन । तर, यसले तपाईंको कामप्रति पार्टनरले गुनासो गर्ने ठाउँ सधै रहन्छ । यसले प्रेमको सम्बन्ध पनि बोझिलो बन्छ ।
संकेत-५ : यदि तपाईंको पार्टनर भौतिख सुखलाई लिएर बढी नै सक्रिय हुन्छन् भने तपाईंले उक्त पार्टनरसँग सुखमय जीवन विताउन सक्नुहुन्न । अति कुनैपनि कुरामा राम्रो हुँदैन । पैसालाई महत्व दिने पार्टनरले सम्बन्धमा खास ध्यान दिदैन ।
संकेत-६ : यदि कुनै काम बिग्रन्छ वा केही गल्ती हुन्छ, तब तपाईंका पार्टनर सबै दोष तपाईंमाथि थोपर्छन् । यस्ता व्यक्ति गैर जिम्मेवार र कमजोर हुन्छन्, जो आफ्नो गल्ती स्विकार्न डराउँछन् । आरोप लगाउनु उनीहरुको सबैभन्दा सजिलो काम हो । यसरी अर्कामाथि दोष थोपरेर उनीहरु आफुलाई सुरक्षित महसुष गर्छन् ।
नक्कली सौन्दर्य प्रशाधनप्रति सावधान !
स’न्त कविरका विश्‍व चर्चित भनाइहरू
देउरानी-जेठानीः मनमुटाव कि मेलमिलाप ? कस्तो हुन्छ सम्बन्ध ?